ကာကွယ်ဆေးတွေ ထွက်ပေါ်လာလည်း ပြီးဆုံးသွားမှာ မဟုတ်တဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ….. – Let Pan Daily
ကာကွယ်ဆေးတွေ ထွက်ပေါ်လာလည်း ပြီးဆုံးသွားမှာ မဟုတ်တဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ …..
Let Pan | August 16, 2020 | World News | No Comments
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ပြီးဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ပါ
ပညာရှင်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကပ်ရောဂါဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဦးမယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ နောက်ပိုင်း နှေးနှေးကွေးကွေးပျံ့နှံ့မယ်။ ရောဂါကူးစက်မှုများတဲ့နေရာပဲကွက်ပြီး လော့ဒေါင်းလုပ်လိုက်၊ ပြန်ဖွင့်လိုက် ..ဒါဟာ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို လူတွေအတွက် အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့။
ပြီးတော့ အခြားရောဂါတွေလို COVID-19 ရောဂါဟာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကူးစက်လာပြီး ဒါဟာရာသီတုပ်ကွေးလို ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်။ ကနဦး ထွက်လာတဲ့ကာကွယ်ဆေးက ခြောက်လအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ခြောက်လတစ်ကြိမ် ထိုးရမယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လူပေါင်းသန်း ၂၅၀ လောက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်ကူးစက်ခံရပြီး ၁.၇၅ သန်း သေဆုံးမယ်။
ရာသီဥတုအေးလာတိုင်း ရောဂါအကူးအစက် များလာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မျက်နှာဖုံး ( mask ) တပ်တာလည်း နေ့စဉ် အင်္ကျီဝတ်သလို ဖြစ်သွားမယ်တဲ့..။ ( modelers from London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).) အခု ဆိုးလ်မြို့မှာဆို မျက်နှာဖုံးမပါတဲ့ သူတွေ ဘတ်စ်ကား၊ ရထားမစီးရ။ အနှင်ထုတ်ခံရတယ်..။
ဒီနေ့သတင်းထဲမှာပါတာက မျက်နှာဖုံး ( mask ) မပါတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက် ဖုန်းပြောရင်း ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်စီးတယ်။ ဘတ်စ်ကားမောင်းသူက ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းဖို့ပြောတော့ စကားများတယ်။ ဘတ်စ်ကားသမားက ရဲတိုင်တော့ ရဲတွေက ရှေ့မှတ်တိုင်က လာစောင့်နေတာ။ ရဲတွေက မျက်နှာဖုံး ( mask ) မတပ်သူကို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ် ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်ပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။
ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ကလည်း အသက် ၄၀ ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် မျက်နှာဖုံးမတပ်လို့ အခြားခရီးသည်က မျက်နှာဖုံး ( mask ) တပ်ဖို့ တောင်းဆိုလို့ရန်ဖြစ်ကြတာ မျက်နှာဖုံးမတပ်သူ အမျိုးသမီး အခု ရုံးတင်စစ်ဆေးခံနေရပြီ။ အောက်တိုဘာလ အစပိုင်းကစပြီး တောင်ကိုရီးယား အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေမှာ မျက်နှာဖုံး ( mask ) မဝတ်ရင် ဒဏ်ငွေဝန်ဆောင်မှု တစ်သိန်းနဲ့ အထက်တဲ့။ တောင်ကိုရီးယားကမောင်နှမတွေ မျက်နှာဖုံး ( mask ) အပိုဆောင်ပြီး ခရီးသွားကြပါ။
မေရွှမိုး ( ကိုရီးယား)
ကာကှယျဆေးတှေ ထှကျပျေါလာလညျး ပွီးဆုံးသှားမှာ မဟုတျတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ရောဂါ …..
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါ ပွီးဆုံးသှားမှာ မဟုတျပါ
ပညာရှငျတှရေဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြအရ ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ ဇှနျလအထိ ကမ်ဘာကွီးမှာ ကပျရောဂါဆကျလကျဖွဈပှားနဦေးမယျ။ ဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ နောကျပိုငျး နှေးနှေးကှေးကှေးပြံ့နှံ့မယျ။ ရောဂါကူးစကျမှုမြားတဲ့နရောပဲကှကျပွီး လော့ဒေါငျးလုပျလိုကျ၊ ပွနျဖှငျ့လိုကျ ..ဒါဟာ ပုံမှနျဖွဈစဉျတဈခုလို လူတှအေတှကျ အထူးအဆနျးမဟုတျတော့။
ပွီးတော့ အခွားရောဂါတှလေို COVID-19 ရောဂါဟာ ပွတျတောငျးပွတျတောငျးကူးစကျလာပွီး ဒါဟာရာသီတုပျကှေးလို ပုံမှနျတဈခုဖွဈလာမယျ။ ကနဦး ထှကျလာတဲ့ကာကှယျဆေးက ခွောကျလအကာအကှယျပေးလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ခွောကျလတဈကွိမျ ထိုးရမယျ။ ခနျ့မှနျးခွအေားဖွငျ့ လူပေါငျးသနျး ၂၅၀ လောကျ ကမ်ဘာတဈဝနျးတှငျကူးစကျခံရပွီး ၁.၇၅ သနျး သဆေုံးမယျ။
ရာသီဥတုအေးလာတိုငျး ရောဂါအကူးအစကျ မြားလာနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ မကျြနှာဖုံး ( mask ) တပျတာလညျး နစေ့ဉျ အင်ျကြီဝတျသလို ဖွဈသှားမယျတဲ့..။ ( modelers from London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).) အခု ဆိုးလျမွို့မှာဆို မကျြနှာဖုံးမပါတဲ့ သူတှေ ဘတျဈကား၊ ရထားမစီးရ။ အနှငျထုတျခံရတယျ..။
ဒီနသေ့တငျးထဲမှာပါတာက မကျြနှာဖုံး ( mask ) မပါတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျ ဖုနျးပွောရငျး ဘတျဈကားပျေါတကျစီးတယျ။ ဘတျဈကားမောငျးသူက ဘတျဈကားပျေါက ဆငျးဖို့ပွောတော့ စကားမြားတယျ။ ဘတျဈကားသမားက ရဲတိုငျတော့ ရဲတှကေ ရှမှေ့တျတိုငျက လာစောငျ့နတော။ ရဲတှကေ မကျြနှာဖုံး ( mask ) မတပျသူကို ပွဈမှုကြူးလှနျသူအဖွဈ ဘတျဈကားပျေါတကျပွီး ဖမျးဆီးလိုကျတယျ။
ဩဂုတျလ ၅ ရကျနကေ့လညျး အသကျ ၄၀ ကြျောအမြိုးသမီးတဈယောကျ မကျြနှာဖုံးမတပျလို့ အခွားခရီးသညျက မကျြနှာဖုံး ( mask ) တပျဖို့ တောငျးဆိုလို့ရနျဖွဈကွတာ မကျြနှာဖုံးမတပျသူ အမြိုးသမီး အခု ရုံးတငျစဈဆေးခံနရေပွီ။ အောကျတိုဘာလ အစပိုငျးကစပွီး တောငျကိုရီးယား အမြားပွညျသူသုံးသယျယူပို့ဆောငျရေးယာဉျတှမှော မကျြနှာဖုံး ( mask ) မဝတျရငျ ဒဏျငှဝေနျဆောငျမှု တဈသိနျးနဲ့ အထကျတဲ့။ တောငျကိုရီးယားကမောငျနှမတှေ မကျြနှာဖုံး ( mask ) အပိုဆောငျပွီး ခရီးသှားကွပါ။
မရွှေမိုး ( ကိုရီးယား)
ကမ္ဘာ့အချောဆုံး အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံ ( ၁၀ ) နိုင်ငံ
အိမ်နီးချင်းတွေ ကို လွှမ်းမိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့ ချိုင်းနားလှိုင်း နှင့် တရုတ်ကို တကယ်ကြောက်ရမှာလား
သင်္ချိုင်းမြေ မှာ ကျင်းများ အသင့်တူးထားပြီး သေသူတွေကို စောင့်နေ တဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံ အခြေအနေ
အမေရိကန် ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သေချာပေါက် တုံ့ပြန်တော့မယ်လို့ တရုတ်အစိုးရက အတိအလင်း ကြေညာ